आज जेठ २७ गते बिहीबारको दैनिक राशिफल, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य हेर्नुहोस् – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. आज जेठ २७ गते बिहीबारको दैनिक राशिफल, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य हेर्नुहोस् – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
आज जेठ २७ गते बिहीबारको दैनिक राशिफल, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य हेर्नुहोस्
मेष राशि चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ बोलिको गलत अर्थ लाग्न सक्ला तसर्थ वाणीमा ध्यान दिनुहोला । संचित रकम खर्च हुन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । सामान्य चोट पटक वा स्वास्थ सम्बन्धी समस्याको सामना गनुपर्नछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलामा फसिने सम्भाबना रहेकोछ ।
मिन राशि दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि अरुको बिश्वास गर्नाले धो’का हुन सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्छ । तात्कालिन आर्थीक अभाबको सामना गर्नुपर्नेछ । नजीकका ब्यत्तित्वहरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको June 10, 2021 210 Viewed